Yini okubanjwayo: amanani nokuthi ungakubala kanjani osukwini lwakho nosuku | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 30/05/2021 12:14 | Kubuyekezwe ku- 30/05/2021 12:18 | Umnotho jikelele
Omunye wemibono ethonya kakhulu usuku nosuku ukugodla. Lezi zaziwa njengamanani akhokhwa ngumkhokhi wentela ukuze awafake kusengaphambili enteleni okufanele ikhokhwe. Kepha, Yini ukugodlwa? Kunezinhlobo eziningi?
Okulandelayo sifuna ukukhuluma nawe ngomqondo wokugodlwa, izinhlobo ezikhona kanye nezinto ezithile okufanele uzicabangele ngalo mqondo.
1 Yini okubanjwayo
2 Ukubaluleka kokugodlwa
3 Kubalwa Kanjani Ukugodla
5 Izinhlobo zokubanjwa
5.2 Ukugcinwa kobuchwepheshe
Uma sincika ku-Agency Agency, ichaza ukubanjwa njenge "Izimali ezidonswa kumkhokhi wentela ngumuntu okhokha imali ethile, njengoba kumisiwe emthethweni, ukuyifaka ku-Tax Administration" njengentuthuko "yentela okumele ikhokhwe ngumkhokhi wentela."
Ukugodla kufanele kuqondwe njengokuphakanyiswa kwesiphathimandla senkantolo yezokuphatha esingagodla inani elithile lemali engenayo noma imali engenayo yomuntu ukuze akhokhe intela yentela, ngokuzayo (isikhathi esifushane, esimaphakathi noma eside) okufanele uyikhokhe.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi uyazisebenza nokuthi kufanele uhambise i-invoyisi kukhasimende. Lokhu ngeke kuphathe i-VAT kuphela, kepha futhi nentela yomuntu siqu engenayo izosuswa. Leyo mali ekhishwayo iyona efakwe kuHulumeni njengesengaphambili sento, kwikota, ezokhokhwa (ngakho-ke uma isikhathi sifika, kufanele isuse leyo mali esivele ikhokhiwe).
Ngamanye amagama, Sikhuluma ngenani elithile eligodliwe umholo, i-invoyisi noma, ekugcineni, umbono wezomnotho inhloso yawo ukukhokha ingxenye yentela ukuthi, esikhathini esithile, kuzofanele ukhokhe.
Abantu abaningi nochwepheshe bayazi ukuthi kufanele bagodle ama-invoyisi abo nokuthi, ngakho-ke, ngeke bathole inani lemali elilindelwe, kodwa kakhulu. Kepha iqiniso ukuthi kubalulekile ukwenza okugodliwe ngezizathu eziningi:
Ngoba bagwema ukukhwabanisa kwentela. Ngokukhokha ingxenye ethile yentela kusengaphambili, uMbuso uyaqinisekisa ukuthi lowo muntu uyafaka amafomu entela, ngaphandle kwalokho kungenzeka ukuthi ulahlekelwa yimali. Isibonelo, ake ucabange ukuthi ufake i-invoyisi futhi ukhokha ama-euro angama-100. Kepha phambilini ubukhokhele ama-euro angama-200 wentela. Yebo, uma ungayivezi, uzolahlekelwa yilawo ma-euro awu-100.
Ngoba kuthuthukisa ukwenziwa kwemali koMbuso. Akunakugwenywa ukucabangela lokhu. UMbuso uthola imali kwizakhamizi zawo futhi lokho kusho ukuthi ungakhokha ukuze ufeze izibopho zawo. Uma kufanele ulinde wonke umuntu ukuthi akhokhe ubungeke ube nemali yokuqhubeka "usebenze" okuzokuphoqa ukuthi usebenzise imali obolekisayo.
Kubalwa Kanjani Ukugodla
Ukugodla kulula kakhulu ukubalwa. Lapho usukwazi ukuthi kufanele ukhiphe malini, udinga kuphela ukwazi ukuthi siyini isisekelo, okungukuthi, imali okufanele usebenzise kuyo ukubamba.
Isibonelo, cabanga ukuthi unebhilidi lama-euro angama-100 futhi kufanele uthathe intela yakho engenayo. Le mali okufanele uyisuse ichazwa nguHulumeni futhi iyafana njalo ngonyaka. Kulokhu, sikhuluma nge-15% (kukhona okuhlukile ngokuya ngecala, kepha ngokujwayelekile yileli nani).
Lokho kusho ukuthi i-15% kumele isuswe kuma-euro angama-100. Ngamanye amazwi:
I-15% yama-euro angu-100 ngama-15 euros. I-100 - 15 euro ilingana nama-euro angama-85. Lokho kungaba yilokho ozokuthola ngempela ngoba amanye ama-euro angama-15 kufanele akhokhe intela.
Akudingekile ngaso sonke isikhathi ukufaka isicelo sokubamba, kunamacala kanye nokuhlukile lapho izakhamizi nezinkampani zingakususa khona (yize kamuva kusho ukuthi bazokhokha izintela eziningi).
Ngokuvamile, kufanele ufake isicelo sokubamba lapho:
Inkokhelo incike kulokho.
Inkokhelo idlula inani noma isisekelo esingaphansi kokugodlwa.
Lowo okhokhayo ungumbambeli ogodliwe, okungukuthi, umuntu ozisebenzayo noma inkampani okufanele iphathe ukungena kwezintela zakho. Lokhu kusebenza ikakhulukazi kochwepheshe ababhalise esigabeni sesibili nesesithathu se-IAE (Intela Yemisebenzi Yezomnotho).
Umhlomuli ukhonjelwe ekubambeni (imvamisa, lapho ufaka i-invoyisi enkampanini).
Lapho wenza ukubanjwa, kukhona izinhlobo eziningi okufanele wazi ukuthi uzokwazi ukuzisebenzisa kahle. Futhi ngukuthi amaphesenti womabili nemali engenayo ethintekayo okubanjwayo kusungulwa ngomthetho.
Ngokuvamile, ukubanjwa okuvame kakhulu yile:
Noma ngubani onekhaya eliqashisayo kumele enze ukubamba ama-invoyisi, inqobo nje uma umuntu oqashiwe enza umsebenzi wezomnotho. Uma kungenjalo, kuzodingeka ukuthi kubhekwe ukuthi akukho yini ukugcinwa noma akukho amacala athile.
Eqhutshwa ochwepheshe, nguyena lowo Kwenziwa kuma-invoice abawakhiphayo ukuwaqoqela imikhiqizo yabo kanye / noma izinsizakalo. Lokhu kufana nalokhu okuchazwe ngaphambili, lapho kudonswa khona iphesenti lesisekelo senani. Ngale ndlela, kufanele bakhokhe uMnyango Wezezimali njalo ngekota kubhekwe lokho asebekukhokhile ku-invoyisi ngayinye.
Inkokhelo. Okhokha ngokwabo baphatha ingxenye ebanjelwe ukukhokhelwa kuMgcinimafa. Le yinani eligodliwe umholo ukuze umqashi akwazi ukulikhokha kwi-akhawunti yomsebenzi. Lapho kulungiswa umholo, kucatshangelwa umholo ophelele, okungukuthi, inani lemali elitholwe ngaphambi kokubanjwa nokuthi imali okufanele ikhokhwe kuMgcinimafa ibanjelwe bani.
Izabelo. Uma unezabelo, kufanele wazi ukuthi nawe kufanele ubambelele kuzo. Kwenziwa kuzo zombili izibambiso nezindawo ezithengiswayo.
Ngezimali, amadiphozithi nokuphepha kwemali engenayo engaguquki. Noma imikhiqizo efana nokuthi, ngokomthethonqubo, nayo izowela lapho kuphoqelekile ukugcina inani.
Intela Eyengeziwe. Lokhu kwaziwa kakhulu, ikakhulukazi ngamagama aso, VAT. Imvamisa, abaqashi bayayisebenzisa uma sebenikeze intengo yomkhiqizo noma yensizakalo (noma bafaka amanani nge-VAT ifakiwe). Kodwa-ke abayitholi yonke leyo mali ngoba ingxenye yayo ukuyifaka kwi-Tax Agency.
Manje njengoba usunolwazi oluthe xaxa mayelana nokugodlwa, uzokwazi ukuqonda kangcono imithethonqubo ebalawulayo nokuthi ngabe wenza ama-invoyisi kahle noma uma ekubambela kahle ekukhokheni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Yini okubanjwayo